Fivarotana - Fitrandrahana harena ankibon'ny tany Cryptocurrency & Mpiandraka GPU an-tserasera
Manolotra iray amin'ireo fivarotana mpitrandraka cryptocurrency tsara indrindra izahay. Mitondra bitcoin avo lenta sy azo antoka izahay fitrandrahana Hardware.
Makà fitaovana tsara indrindra ho an'ny fitrandrahana vola madinika rehetra. Best Bitcoin sy Ethereum Mining Rigs amin'ny vidiny ambongadiny. Mitahiry karatra sary sy kojakoja Mining izahay. Masinina fitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy GPUs.Ny Hardware tsara indrindra ho an'ny fitrandrahana ETH
Vidio ny karatra sary PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 €2,242.80
Vidio ny Bitcoin Miner S19 Pro+ Hyd €9,970.80
Canaan Avalon 1066 (faha-50) Bitcoin Miner €1,848.00
MicroBT Whatsminer M21S (58TH/s) €2,914.80
Vidio ny Goldshell KD-BOX Pro 2.6TH/s 240W (KDA) €4,678.80
Antminer L3+ Litecoin & Doge mpitrandraka 504MH/s PSU & Cord €722.40
Vidio ny ASUS Dual Radeon RX 5700 XT OC 8GB EVO €420.00
Nampiasaina BITMAIN Antminer T17+ (58 TH/s) €1,402.80
StrongU Miner STU-U1 11T Blake256 DCR Miner miaraka amin'ny PSU & Tady €1,848.00
Shiba Inu (SHIB)$0.0000101.71%
Protocole akaiky (akaiky)$3.301.09%
Algorand (ZAVATRA MISY)$0.3076690.69%
Bitcoin Cash (BCH)$105.031.57%
Axie Infinity (AXS)$14.131.57%
Loop peratra (LRC)$0.3850571.99%